RFA Burmese TV June 27, 2017
■ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် ■(၂ဝ၁၇ ဇွန် ၂၇)- ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ် - နယ်မြေအရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အစိုးရကို ရခိုင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြော- အစွန်းရောက်ဝါဒဆန့်ကျင်ဖို့ ချားလ်မောင်ဘိုတိုက်တွန်း- ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်ပြီး ဒေသခံ ၂ ဦးသေဆုံး- သတင်းထောက်သုံးဦးကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ AI အဖွဲ့တောင်းဆို- သတင်းသမားတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာရပ်တန့်ဖို့ တိုင်းရင်းမီဒီယာတွေတောင်းဆို- မြန်မာကို ကလေးစစ်သားနာမည်ပျက်စာရင်းက ပယ်ဖျက်ဖို့ အမေရိကန်စီစဉ်- အခြေအမြစ်မရှိ စွပ်စွဲဆန္ဒပြသူတွေကို အရေးယူမယ်လို့ သူရဦးအောင်ကိုပြော- အထောက်အထားမဲ့ ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ဖမ်းဆီးခံရ... စတဲ့သတင်းတွေနဲ့- သတင်းထောက်သုံးဦး ဖမ်းဆီးခံရမှု- ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ သူရဦးအောင်ကိုအမြင်- သခင်ဗဟိန်း နှစ်တရာပြည့်- မြန်မာ့သစ်တောပြုန်းတီးမှု- အပိုင်း ၂ (အထူးဆောင်းပါး)... စတဲ့အစီအစဉ်တွေကို ရှုစားရမှာပါ။လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/...RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org... RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့:Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxfFacebook: https://www.facebook.com/rf...Twitter: https://twitter.com/RFABurmeseYouTube: https://www.youtube.com/cha...Soundcloud: https://soundcloud.com/burm... တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile AppAndroid: https://play.google.com/sto...Apple: https://itunes.apple.com/us...
KNU-Government battle continues - Duration:4minutes, 57 seconds.
5 years ago399,743 views ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ KNUနဲ့ မြန်မာအစိုးရ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
Success story ofayoung woman of Burma (Jue Jue) - Duration:4minutes, 40 seconds.
6 years ago391,304 views ဘ၀နဲ့အားမာန်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ ဖခင်နဲ့ ဝေးကွာခဲ့ချိန် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကစပြီး မိခင်ရဲ့ အုပ်ထိမ်းမှုနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် ဂျူးဂျူးရဲ့ဘ၀နဲ့ အားမာန်တွေကို ရိုက်ကူး တင်ပြထား...
DKBA: New Government failed for Peace - Duration: 114 seconds.
6 years ago259,717 views အစိုးရသစ်ဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်လို့ တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်က စွတ်စွဲလိုက်ပြီး DKBA ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းအထိ တိုးချဲ့သွားမယ်လို...
Thagyan Festival in Mudon, Mon State - Duration:3minutes, 12 seconds.
2 years ago254,248 views ဒီနှစ်သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့ကလူငယ်တွေဟာ ဆင်တူဝတ်စုံအမျိုးမျိုး ဝတ်ဆင်ပြီး အုပ်စုလိုက် ရေပက်ခံထွက်ကြ တာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
Loi Taileng refugee camp at Thai Myanmar border - Duration:4minutes,9seconds.
3 years ago228,923 views အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA ထိန်းချုပ် နယ်မြေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က လွယ်တိုင်းလျှန်းဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်း RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်မျိုးထွန်းက စုစည...
Myawaddy Road to Thai border - Duration:3minutes,9seconds.
4 years ago201,272 views ထိုင်းနဲ့မြန်မာ နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းတခုဖြစ်တဲ့ မြဝတီ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရဲ့ မော်တော်ကားလမ်းတွေ ပျက်စီးနေတာကြောင့် ခရီးသွားတွေအတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ RFA သ...
Myawaddy border transportation - Duration:6minutes,2seconds.
3 years ago186,343 views ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြဝတီ-ကော့ကရိတ် လမ်းကြောင်းဟာ ထိုင်း-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းအဖြစ် အရေးပါတဲ့လမ်းပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အကူအညီနဲ့ အသစ် ပြန်လည်ဖောက်လုပ် ခဲ့တဲ့ အဲဒီ လမ်းပိုင်းရဲ့ အေ...
Myein Gyi Ngu Battle and its Impact - Duration:5minutes, 15 seconds.
6 years ago183,405 views ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ပြန်လည် ပူးပေါင်းပြီး ဒီကေဘီအေ ဌာနချုပ်ရှိရာ မြိုင်ကြီးငူကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် KNU, DKBA, BGF, ABSDF နဲ့ စစ်အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်...
Land Confiscation in Karen State - Duration:4minutes, 15 seconds.
4 years ago136,382 views ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ နဘူးတောင်ကျေးရွာမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လယ်မြေသိမ်းဆည်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး KNU-KNLA ဗဟိုဌာနချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒေသခံ လယ်သမားတွေ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံက...
DKBA Saw LarPwe: Why am I fighting - Duration:3minutes.
6 years ago134,016 views DKBA တပ်မဟာ (၅) တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်က သူဘာကြောင့် စစ်အစိုးရနဲ့သဘောတူထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်ပြီး လက်နက်ပြန်လည် စွဲကိုင်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပါတယ်။
US president' Obama's Trip to Burma - Duration:6minutes, 11 seconds.
4 years ago130,451 views အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမား ရဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုစည်တင်ပြထားပါတယ်။
Detained Ex-Religious Minister Pleads Not Guilty - Duration:4minutes, 1 second.
2 years ago125,719 views အဂတိလိုက်စားမှု၊ သံဃာတွေနဲ့ အစိုးရအကြား အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် လုပ်ဆောင်မှု... စတာတွေနဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကို ဒီနေ့ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဒုတိယအကြိမ...
DVB TVnews - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe VOA Burmese - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Eleven Broadcasting - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Kamayut Online TV - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Tar Nai - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe 7Day TV - Channel